Ajụjụ ọnụ nke María José Moreno, onye edemede nke Trilogy of Evil | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ajụjụ ọnụ María José Moreno, onye edemede nke Trilogy of Evil
The Trilogy of evil: Olee oke ihe ọjọọ ndị mmadụ gbara anyị gburugburu na-ezo?
Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere taa na blọọgụ anyị Maria Jose Moreno (Cordoba, 1958), onye edemede, isi mgbaka y onye edemede nke Trilogy of Evil, nke a ga-agbapụ n'oge na-adịghị anya n'ụdị usoro telivishọn.
«Ike mmegharị nke ụmụ mmadụ dị ukwuu. N'ọnọdụ ndị dị oke njọ, anyị na-amụta ibi ndụ na nke abụọ n'ihi na nkeji ahụ bụ ọdịnihu a na-ejighị n'aka. Ibi ebe a ugbu a ga - ekwe omume ... Ourbụrụ anyị nwere ikike nke iduhie anyị ka anyị dịrị ndụ ma ghara ịhapụ onwe anyị obi nkoropụ »(La Fuerza de Eros. María José Moreno)
Akwụkwọ akụkọ: Onye na-agwọ ọrịa uche, onye edemede ọtụtụ, site na akụkọ ụmụaka na akwụkwọ akụkọ mpụ site na ihe nkiri na ọdachi. Hụnanya gị maka nka ederede na-abịakwute gị mbubreyo, na 2008 ma kemgbe ahụ ị jirila ụdị dị iche iche nwaa. Gịnị were gị otu ụbọchị ịsị "aga m ede akwụkwọ akụkọ"? Na afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ide akwụkwọ akụkọ mpụ n'aka onye isi nyocha gị, Mercedes Lozano.
Ọ na-amasịkarị m ịgụ ọtụtụ akwụkwọ m na-echekwa ogologo oge iji mara ma m ga-enwe ike ide akwụkwọ edemede. Workgachi ọrụ anya na akwụkwọ sayensị were oge m niile. Na 2008, enwere m mgbanwe na ike ọrụ m wee hụ ohere ịmalite site na ọrụ akụkọ ifo. Otu echiche nọ na-efegharị n'isi m ogologo oge: "ihe ọjọọ dị anyị n'akụkụ ma anyị amaghị etu esi amata ya." Nke a bụ ihe m na-ahụ ma na-ahụ kwa ụbọchị na ụlọ ọrụ psychiatry m na ọ bụ ihe ndabere m ji mepụta The Trilogy of Evil. Site n'echiche ahụ, amalitere m akwụkwọ mbụ m na nke mbụ nke trilogy, La caress de Tánatos. O were m ogologo oge ide ihe ndị ọzọ. Mgbe m na-ede ya, echeghị m ịkọwa ya n'ụdị oji. Ọ bụ ụlọ obibi akwụkwọ kwuru ka etinye ya n'usoro ojii ya n'ihi nsogbu siri ike o lebara anya, kama ọ bụ n'ihi na ha gbasoro njirimara nke ụdị ahụ.
AL: Ebumnuche nke akwụkwọ akụkọ gị bi, n'etiti ihe ndị ọzọ, na usoro mmetụta uche, mkpali nke ndị omekome, kama na usoro mmebi iwu na ndị uwe ojii nke ụdị a. N'ime ọrụ gị dịka onye dibịa na-agwọ ọrịa uche ị ga-ama ọtụtụ egwu na-ezoro ezo, ihe nzuzo na-enweghị ike ịkọwapụta na mmetụta na-ada mba. Ọ bụ akụkụ gị dị ka onye na-agwọ ọrịa uche, mmasị gị na usoro mmetụta uche nke ndị mmadụ na-akpali onye edemede ahụ n'ime gị?
Akụkụ m dị ka onye na-agwọ ọrịa uche nọ mgbe niile. Akwụkwọ akụkọ m gbasara ndị dị adị n'ezie, ndị na-agagharị na ndụ kwa ụbọchị, ndị anyị na-ezute n'okporo ámá, na ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ na bọs na ihe na-eme ha, dịka ndị ọzọ. Onye hụrụ n'anya, na-ata ahụhụ, anyaụfụ, na-achọ imegwara, nwere ihe na-emegiderịta onwe ha ... Ha bụ ndị anụ na ọbara ndị anyị nwere ike ịmata; ọbụna "ndị ọjọọ" dị adị nke na ndị na-agụ akwụkwọ hụrụ ngwa ngwa otu n'ime ndị ọjọọ ahụ nọ ha nso. Ihe omuma m adighi adabere na nyocha ndi uwe ojii, uzo m gbaliri ime ka o doo anya na onwere ndi choro imebi ndi ozo ka obi di ha nma, ha onwe ha, inwe obi uto ma nwe ike na ndi ozo. Na-esote ya, onye ahụ a tara ahụhụ na-enwe nsogbu ekwughi ekwupụta na ọtụtụ oge ọ na-adị owu ọmụma n'ihi na ọ nweghị ike ikwupụta ihe na-eme ya. Nkwekorita nke idere duu bu ihe aghaghi ichupu. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ị ga-abanye n'akụkụ mmetụta uche iji nwee ike ịmepụta akụkọ ndị a na-eru n'ime ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na, na mgbakwunye, ha na-adọ ndị na-agụ ya aka na ntị.
AL: Onye nyocha gị, Mercedes Lozano, bụ onye na-agwọ ọrịa psychotherapist. Onye nyocha mbụ nke Spanish ojii na ụdị ọrụ a. Are bụ onye na-agwọ ọrịa uche: ole ka ahụmahụ gị bụ Mercedes Lozano yana, karịa ihe niile, otu Mercedes Lozano si metụta María José Moreno?
Na ọkwa nke onwe, Mercedes enweghị ihe ọ bụla nke m, na ọkwa ọkachamara enyerela m ahụmịhe m karịa 35 afọ na-arụ ọrụ na ndị uche ha n'ụzọ ụfọdụ adịghị edozi na ndị na-ata ahụhụ n'ihi ya. Na mgbakwunye, ihe odide ahụ na-adọta n'aka ọtụtụ mmadụ ndị gafere oge m gafere na m zutere omimi.
AL: Kedu ka akwụkwọ akụkọ gị si daba na ọha mmadụ nke oge a? Mgbe ị na-ede, gịnị ka ị chọrọ ka ndị na-agụ ya cheta gbasara gị? Kedu ihe ndị masịrị gị karịa akụkọ ihe mere eme nke kpuchitere ha?
Pedophilia gosipụtara ike n'ike nke Force of Eros.
Na mbido ịmalite ide, ihere mere m ịkụziri ihe m dere, ọ bụ ya mere m ji bido blog ebe m dere akụkọ dị mkpirikpi ma etinyere m akwụkwọ maka akụkọ mkpirisi. Mgbe m nwetara ohere na ndị na-eso ụzọ na blọọgụ bawanyere, ọ bụ mgbe m ghọtara na ihe m dere masịrị m na nke ahụ mepere m ibipụta akwụkwọ akụkọ mbụ m n'efu, Ndụ na ọrụ ebube nke onye bụbu, akwụkwọ ọchị. Ọ bụ ihe ịga nke ọma na m bugoro ya ozugbo na Amazon na, emesia, Bajo los Tilos, ihe omimi dị mkpirikpi nke ghọrọ dijitalụ "kacha mma"; mgbe ahụ ka The Evil Trilogy bịara. N'ime akwụkwọ akụkọ niile enwere ihe jikọrọ ya na ọ bụ mkpa m na-enye ndị odide na akparamaagwa ha. Ndị a dị oke mkpa, ha na-akọwa ihe kpatara anyị ji eme ihe anyị na-eme. N'ihe banyere trilogy nke ihe ọjọọ dị iche na akwụkwọ mpụ dị ọcha nke naanị onye chọrọ igbu ọchụ na-achọ. Enwere m mmasị na ịmaliteghachi onwe m ihe kpatara ihe ọjọọ dị ka nke a, ọnọdụ ndị metụtara ndụ ya na ime nke a. Ọzọkwa, akwụkwọ akụkọ m niile nwere usoro ọmụmụ, nke mmụta, nke m na - enweghị ike iwepụ, ikekwe maka akụkụ ọrụ ọzọ m nwere, nke onye nkuzi.
AL: N'oge na-adịbeghị anya Macarena Gómez, onye na-eme ihe nkiri a maara maka ọrụ ya dị ka Lola na usoro usoro Nke na-ada, enwetala ikike nke Trilogy of Evil iji weta ya na igwe onyonyo. Kedu ka ọrụ ahụ si aga? Oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ Mercedes Lozano na usoro usoro telivishọn?
Macarena Gómez nwere nhọrọ ịzụta ikike nke trilogy maka ntụgharị ya ka ọ bụrụ ọrụ ọdịyo, wuo edemede, chọta onye na-emepụta ihe ma si otú a gbalịa ịme usoro telivishọn. Ọ bụrụ na ihe niile a dị mma, ọ ga - enweta ikike nke ọrụ zuru oke. N'ụwa a nke ọdịnaya ọdịyo, ihe niile dị mgbagwoju anya ma atụkwasịrị m obi na a ga-arụ ọrụ ahụ. Agbanyeghi na amaghi m amiti. N'otu aka, m ga-achọ ịhụ ya na ihuenyo, mana na nke ọzọ, amaara m na ihe isi ike maka ederede zuru oke nke akwụkwọ akụkọ ahụ dị ọtụtụ nke na ụjọ na-atụ m na a ga-ekwuhie ya, dịka o mere ọtụtụ oge ya na akwukwo ndi ozo eji eme ihe nkiri na telivishọn.
AL: Akwụsịla Trilogy nke Ọjọọ, ọ bụ oge ezumike nká Mercedes Lozano? Ma ọ bụ na anyị ga-anụ ya ọzọ?
O gwula. N’akụkọ edemede nke akwụkwọ ọhụụ, Force of Eros, Mercedes bidoro ndụ ọhụụ, n’echiche dịpụrụ adịpụ na ihe niile dị n’elu. Mana ... Anaghị m achị achị, ka oge na-aga, ịlaghachi iji weghachi omume ahụ masịrị m nke ukwuu. Mercedes nwere nnukwu mgbanwe n’ime akwụkwọ akụkọ atọ a. Oge afọ na ihe omume ndị na - eduga ya n’ọnọdụ ndị jọgburu onwe ha, na - eme ka o tozuru oke n’ụzọ dị egwu. Ọ dị ka a ga - asị na mụ, onye okike ya, tọgbọrọ ya n'ihe ndina ya na akwụkwọ akụkọ atọ ahụ doro ya n'okpuru ọgwụgwọ psychotherapeutic.
AL: Kedu otu ị ga - esi luso ọgụ nke onye edemede? Onye ga-egosi ọrụ gị tupu ịhapụ ya ka ha hụ ìhè?
Anọghị m naanị m, enwere m ndị nọ m gburugburu na-eso m mgbe m bidoro ide ihe. Ha bụ ndị ndu m, ndị na-agụ m efu. Ha bụ ndị na-eji akpọrọ aha ma m n’eso ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na ọbụghị na ha bụ ndị dọnyere ụkwụ m n’ala. Na nke ahụ, ana m ewere onwe m nke ọma. Onye ọ bụla na-abanye n'otu oge a kapịrị ọnụ nke imepụta, ụfọdụ na-eso m n'isi n'isi site na isi na ndị ọzọ ugbua mgbe akwụkwọ akụkọ ahụ sara mbara.
AL: Agaghị m agwa gị ka ị họrọ n'etiti akwụkwọ akụkọ gị, mana m ga - arịọ gị ka i mepee mkpụrụ obi onye na - agụ ya. N'ime ha, ọ bụla ode akwụkwọ ị nwere mmasị na ya, ụdị ị na-azụta naanị ndị a na-ebipụta? Akwụkwọ ọ bụla ịchọrọ ịgụ ọzọ site n’oge ruo n’oge?
Agụrụ m ụdị ọ bụla ma e wezụga echiche efu na ụjọ. M n'ezie na-amasị mpụ na mpụ akwụkwọ akụkọ, chiri anya akwụkwọ akụkọ, kemmeochi akwụkwọ akụkọ, ezi ihunanya akwụkwọ akụkọ… Dabere na ọnọdụ uche m, m na-ahọrọ ịgụ, nke ahụ bụ ogologo oge gara aga. Echere m na mgbe ụfọdụ anyị na-esi ọnwụ na anyị ga-agụ akwụkwọ akụkọ ụfọdụ nke oge na-erubeghị. Enwere ọtụtụ ndị ode akwụkwọ m nwere mmasị na ya na ndị m na-azụ akwụkwọ akụkọ ha, ọ nweghị onye ọ bụla nwere ike ịgwa gị. Akwụkwọ ọhụrụ M Gụgharia: Onyeisi nke Tides, Ahụrụ M Ya n’anya, site n’aka Pat Conroy; Rebecca de Daphne du Morier, Ahụ na Mkpụrụ Obi Maxence Van der Meersch ma ọ bụ Wuthering Heights nke Emily Brönte dere.
AL: started malitere ọrụ edemede gị na ụwa dijitalụ, na Amazon, tupu ịwụda na akwụkwọ. Ohi izu ohi ọ na-ewute gị? You chọpụtala obere mmetụta mgbe ịmalitere ibipụta na akwụkwọ?
Ọ na-ewute m nke ukwuu ma na-aga n'ihu na-eme ya. Ọ bụrụ n’ịchọta akwụkwọ n’efu, gịnị kpatara ị ga-eji zụta ya n’akwụkwọ, ma ọ bụ ọbụghị ịkwụ ụgwọ nzuzu maka dijitalụ. Hacking na-ewute ndị edemede niile, ma ị bipụtara na akwụkwọ na dijitalụ ma ọ bụ naanị bipụta naanị na dijitalụ. Enwere ederede nke na-ekpuchi onwe ha site na ịghara ibipụta na dijitalụ, mana ọ bụ eziokwu na enweela ọtụtụ ndị na-agụ naanị na ndị na-agụ ebook, na ihe ha na-efunahụ ndị na-ege ntị. Ọ bụ ezie na ndị ohi na-ekwu na ha na-eme ya n'ihi na ebook dị oke ọnụ, ọ bụghị eziokwu. Ha zoro m ụra, ad nauseam, akwụkwọ m bụ Bajo los tilos, nke na-efu € 0,98 na Amazon. Ihe na - eme bụ na ha anaghị eji ọrụ, mbọ, awa ọ ga - ewe iji dee akwụkwọ egwu akpọrọ ihe na nke ahụ bụ ihe a ga - akụzịrị ụmụaka site na nwata. Naanị site na agụmakwụkwọ na nkwanye ùgwù ka a ga-alụ ọgụ maka otu ụbọchị.
AL: N'agbanyeghị ọdịdị ọdịnala nke onye edemede edebatara, kpọchiri ma na-enweghị mkparịta ụka mmekọrịta, enwere ọgbọ ọhụụ nke ndị edemede na-edegharị kwa ụbọchị ma na-ebugo foto na Instagram, bụ ndị ndị na-elekọta mmadụ na-ekwurịta okwu na ụwa. Kedu ka mmekọrịta gị na netwọkụ mmekọrịta dị?
Kemgbe m malitere ide, mụ na ndị na-agụ akwụkwọ m na-enwe mmekọrịta, ọkachasị site na blọgụ m, Facebook na Twitter. Enwere m ike ịsị na erutela m ebe m nọ maka netwọkụ. Mana anyị niile ndị na-agabiga n’ime ha maara etu ha si arụ ọrụ. Na mgbakwunye, ọ dịghị mfe iburu ihe niile n'ihu. Ọrụ, edemede, ezinaụlọ na netwọkụ mmekọrịta anaghị adịkarị iche iche. Ihe m na-eme bụ site n'oge ruo n'oge m na-apụ nwa oge, ana m edepụta onwe m, ma m na-eji ike ọzọ abịaghachi.
M na a na-akwado nke dijitalụ format kemgbe ọ bịara, ukwuu n'ime ka mma. Ogologo oge m gụrụ akwụkwọ naanị dijitalụ, mana otu afọ, agụghachiri m akwụkwọ. Ugbu a ana m agbanwe ha, agbanyeghị na ekwesịrị m ikwupụta na ntụgharị nke ibe akwụkwọ na-ejide m ọzọ.
AL: N'agbanyeghị afọ ndụ gị, ị ghọọla nne nne. Kedu oge pụrụ iche nke ọrụ aka gị, dịrị ndụ ma na-adị ndụ, nke ị ga-achọ ịgwa ụmụ ụmụ gị?
Amabeghị m echiche banyere obere agha m ga-agwa nwa nwa m Alberto gbasara ọrụ m. N'oge ahụ, ọ na-atọ m ụtọ kwa ụbọchị na uto ya, ana m emekwa ka ọ nwee mmasị n'ịgụ ihe, dịka nne m mere m na ya na nne ya.
N'ihi afọ ndụ m, agafeela m ọkwa dị iche iche na nke ụmụ nwanyị nwere ọtụtụ nsogbu chere ha ihu. Mgbe m dị afọ iri na ụma. ọ dị ole na ole n’ime anyị chọrọ ịmụ akwụkwọ, ọtụtụ n’ime anyị nọrọ n’ụlọ ozugbo ha gụsịrị akwụkwọ elementrị. Anyị enweghị ike ịme ihe ọ bụla naanị anyị ma na-echekwa anyị mgbe niile. Ihe niile gbanwere, ugbu a na klas nke Mahadum, n'ọtụtụ nzere, enwere ụmụ nwanyị karịa ụmụ nwoke. Nke a bụ ihe na - eme, dịka ọmụmaatụ, na Medicine. Womenmụ nwanyị nwere ike ime ma rute mpaghara niile n'ihi na ha kwadebere maka ya. Naanị ihe na-echegbu m bụ na, ruo oge ụfọdụ ugbu a, mgbe m na-agwa ndị na-eto eto okwu, ha anaghị eche na mkpali ahụ ga-abụrịrị onwe ha, iji mezuo ọrụ ha kwadebere maka ya ọzọ ana m anụ ahịrịokwu ndị dị ka «Achọghị m ịmụ ihe, ihe kachasị mma bụ ịchọta ezigbo di iji kwado m ”nke ahụ na-eme ka ntutu m guzosie ike mgbe anyị lụsịrị ọgụ na afọ ndị a niile.
AL: Iji mechie, dị ka mgbe niile, aga m ajụ gị ajụjụ kachasị mkpa onye edemede nwere ike ịjụ: Gini mere ị na-ede?
Ana m ede maka obi uto m. Enwere m ezigbo oge na-ese ihe odide, na-echepụta atụmatụ, na-eke akụkọ ma na-etinye okwu na m mepụtara. Na mgbakwunye, enwere m mmasị ịkọrọ ya ndị na - agụ ya, na ha nwekwara ezigbo ma ọ bụ oge ọjọọ na enwere ihe niile.
Daalụ María José Moreno, achọrọ m ka ị gaa n'ihu inwe ọtụtụ ihe ịga nke ọma yana ị na-aga n'ihu na-enye anyị ọtụtụ ọmarịcha akwụkwọ akụkọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Ajụjụ ọnụ María José Moreno, onye edemede nke Trilogy of Evil